Ny finday avo lenta ratsy indrindra araka ny Reddit | Androidsis
Efa hanao veloma ny 2014 isika. Ho an'ny sasany dia taona tsara tokoa io. Ho an'ny hafa, angamba tsy dia be loatra. Ary raha eo am-pieritreretana ny fanapahan-kevitra tsara rehetra ho an'ny 2015 izay efa eo am-baravarana isika, dia izao koa ny fotoana mialoha ny famitana sy ny famintinana amin'ity taona ity. Ary raha ny tsara indrindra smartphones amin'ny taona, na ireo izay nahatratra ny varotra avo indrindra, na dia ireo izay tena tia ny ankamaroany aza dia kilasika, androany amin'ny Androidsis dia mandositra kely amin'ireo lohahevitra ireo izahay ary te hiresaka aminao momba ireo izay ho an'ny mpampiasa ny sehatra Reddit mazava ho azy no ratsy indrindra. Rehefa dinihina tokoa, ny vondrom-piarahamonina dia misy mpampiasa maro, ary noho izany, heverina fa manana taratry ny zava-misy isan'andro isika. Ka raha te hahalala ianao raha mifanaraka amin'ny an'ny maro an'isa ny hevitrao momba ny finday avo lenta dia fotoana tsara hahitana anio.
Amin'ity tranga ity dia te hampiseho aminao izahay hoe inona ireo terminal finday avo lenta finday dimy ratsy indrindra amin'ny tantara raha ny filazan'ny mpampiasa Reddit. Ny zava-misy fa avy amin'ny tantara izy ireo dia midika fa hahita maodely izay tapaka ianao amin'izao fotoana izao, saingy noho ny antony iray na hafa dia nahavita nijanona ho ratsy indrindra na dia teo aza ny zava-misy fa maro ny hafa tonga taty aoriana izay nanana hadisoana na toetra tsy nety ihany nomen'ny mpampiasa mihitsy. Ka, ny tena liana te hahafantatra, anio dia ho fantatrao ny antony handehanan'ny dimy ho avy manaraka amin'ny tantara ho fividianana ratsy indrindra. Farafaharatsiny, araka ny filazan'ny mpampiasa Reddit. Ary raha mieritreritra ianao fa tokony misy fantsona hafa ao amin'ilay lisitra, na hoe misy sisa tavela, dia mila manampy ny hevitrao fotsiny ianao amin'ireo hevitra ireo.
Manomboka amin'ny sary ao amin'ny pikantsarinay izahay. Raha ny marina, ny toetra nahatonga an'io Sony terminal no iray amin'ireo finday avo lenta ratsy indrindra ny tantara no namolavola azy. Manaiky ny ankamaroan'ny mpampiasa fa ratsy tarehy io, na dia tsy araka ny hevitro aza, tsy manadino loatra ny daty nanombohany izany ary ny loko izay lasa taratasy firakofany dia mbola misy ihany ankehitriny amin'ny marika hafa.
Amin'ity tranga ity, ity terminal ity dia niditra an-tsokosoko noho ny zava-misy na dia nilaza aza izy fa manana fahatsiarovan-tahiry 512MB, tamin'ny fampiharana ny finday dia nanolotra 150MB zara raha nianjera ary namadika azy ho telefaona tena tsy dia mandeha tsara ary I fampiharana.
Ny LG G2X dia tsy ilay terminal farany azon'ny LG rehareha. Porofon'ity dia forum misokatra ao amin'ny XDA Developers izay nisy foana ny lesoka sy ny olana tamin'ity terminal ity. Angamba noho izy rehetra ireo ary satria rehefa avy namaha ny iray vaovao dia nipoitra foana dia leo ireo mpampiasa ary nanolotra azy ho kandida amin'ity sokajy ity androany.
Iray amin'ireo finday avo lenta ratsy indrindra amin'ny resaka hafainganana sy fanodinana data. Ny fahatsiarovana azy dia afaka nangatsiaka nandritra ny 5 minitra hamoahana widgets sy rindranasa manokana ary raha manandrana mampiasa Google Maps dia mety ho lasa zava-bita sahirana tokoa ilay zavatra.
Na dia tsy miavaka tsara ho an'ny tombontsoan'ny ankamaroan'ny findainy avo lenta aza i ZTE, dia afaka miditra an'io isa ratsy indrindra io satria amin'ny fampiasana mafy ny bateria dia zara raha nahatratra 2 ora ny faharetany izay nahatonga ny mpampiasa azy hiaina mifatotra azo ampiharina amin'ny plug. .
Azonao ampiana intsony ve ity lisitry ny finday avo lenta faran'izay ratsy hoy ny mpampiasa Reddit?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny finday avo lenta ratsy indrindra araka ny Reddit
Fulgencio Lopez dia hoy izy:
Tsy fantatro hoe hanao ahoana ny hafa fa ny voalohany Sony Xperia U dia iray amin'ireo telefaona tsara indrindra nananako. Volavola hanombohana amin'izay hitako fa tsara sy kanto. Tena nahatohitra izany hatramin'ny nianjera teo am-bisikileta sy nandeha teny amboniko. Ny hany lafiny ratsy nananany dia ny tsy fahafahany mametraka microsd ao aminy, raha tsy izany ity iray ity, na nahafinaritra izany, satria "misaotra" ny whassapp miaraka amin'ireo fanavaozana gilia nataony izay nahatonga ny finday tsikelikely tsy afaka mandeha tsara. Mety tsy ny tsara indrindra, fa azo antoka fa tsy iray amin'ireo ratsy indrindra.
Valiny tamin'i Fulgencio López
ceisa1968 dia hoy izy:
Ny HTC Wildfire dia tsy avy amin'ny 2014 ... Azoko tsara fa ireo natomboka tamin'ity taona ity dia tsy maintsy omena lanja. Raha tsy izany dia tokony ao amin'ilay lisitra ny Nokia 5110.
Valiny amin'ny cesisa1968
Tsy toa an'i Fulgencio, ho ahy, ny Xperia U dia iray amin'ireo ratsy indrindra nananako. Fiainana bateria ratsy, ratsy fampisehoana, nikatona na inona na inona ary koa fakan-tsary ratsy. Ny famolavolana (izay miseho fotsiny) no hany zavatra tiako amin'ity "smartphone" ity.
Titium dia hoy izy:
Ary ny galaxy ace, izany dia aberration tanteraka, mihamangatsiaka isaky ny 2 amin'ny 3, 80mb ho an'ny apps izay tsy misy afa-tsy ny facebook iray no nameno azy io, niverina matetika be dia be izy, ary endrika mampihoron-koditra toa kilalao
Mamaly an'i Titio
xperia anisan'ny ratsy indrindra ve ianao ?? Azafady, biby kely iray izay nanome ho an'ny zavatra rehetra, ny hany zavatra ratsy dia ny fahatsiarovana voafetra nananany, miaraka amina romana tsara dia nahagaga
xhadrian dia hoy izy:
LG L3 azafady mahatsiravina mitovy amin'ny Wildfire fa misy fàfana ratsy kokoa
Mamaly an'i xhadrian
Carlos Jose dia hoy izy:
Nokia Asha, dia finday avo lenta iray izay mampiavaka ny karazany isan-karazany ny lokony, saingy nahatsiravina ilay Rindrambaiko, tsy maintsy nanavao azy ianao ary rehefa tonga. Ny kinova farany tsy nanokatra ny fampiharana, ny bateria tsy naharitra ela, ary ny fampiharana tsara indrindra dia ny WhatsApp, ny hafa kosa banga.
Valiny tamin'i Carlos Jose
Ary aiza ny Samsung Galaxy Ace? Ny fahombiazan'ny fahatsiarovan-tena ratsy dia nianjera niaraka tamin'ny fampiharana roa nisokatra, natomboka indray toa ny asany lehibe indrindra.
Midika izany fa ny motorola droid no zava-dehibe nanomboka tamin'ny 2010 na 2009 teo ho eo ary io no iray amin'ireo android tsara indrindra tamin'ny fotoan'androny tsy azonao apetraka eo
Magari dia hoy izy:
ary tsy misy miresaka momba ny onja samsung miaraka amin'ny Bada OS izay tsy afaka nametraka whatsapp na skype akory
Mamaly an'i Magari
Ny ratsy indrindra ho ahy dia ny SAMSUNG: SAMSUNG Galaxy Y, Ace, Fit ary zava-tsoa mahatsiravina hafa toa ny LG L3. Ny fahatsiarovana anatiny ny 120 MB dia homamiadana, fa ny LG koa tsy nahatratra akory ny loko 16M. Na dia misy fetrany aza ny Android 2.3 aoriana dia izy ireo no fototry ny ananantsika ankehitriny izay tsara. Tena sarobidy amiko ny SAMSUNG Infuse 4G izay nanana fakantsary rehetra, fahatsiarovana anaty, efijery, tena tsara tamin'izany fotoana izany.
Arthur McTavish dia hoy izy:
Tena miombon-kevitra aminao aho !, telefaona lafo vidy tokoa aho ary nivadika ho notsongaina kely fotsiny ny fanamarihana kely 3 miaraka amin'ny scanner an'ny rantsantanana sy ny fon'ny fo, ny zavatra hafa rehetra dia mitovy ihany fa ny note 3 dia manana ondrilahy bebe kokoa, fitehirizana bebe kokoa, efijery bebe kokoa ary s-pen ary koa fampiharana hafa, farafaharatsiny mba ho nanao telefaona mitovy famaritana amin'ilay naoty 4 ry zareo, farafaharatsiny nandiso fanantenana ny marina
Valiny tamin'i Arthur McTavish
Ny smartphone smartphone Palm dia mety ho tonga amin'ny 2015